Qoysas uu saameeyay fatahaadda webiga shabeelle oo deeq la gaarsiiyay – Radio Muqdisho
Maamulka gobolka Shabeelaha dhexe oo kaashanaya Hay’adaha samafalka ayaa kaalmo gaarsiiyay qaar ka mid ah dadkii ka barakacay fatahaadda Webiga Shbeelle iyo Roobkii ka da’ay gobolka.
Ururka haweenka gobolka Shabeelaha Dhexe oo kaashanaya hay’ad samafal ayaa deeq isugu jirta mara kaneeco, maacuun iyo waxyaabo kale gaarsiiyay qoysas ka baracakacay fatahaadda webiga Shabeelle, kuwaasi oo degan tuulada lagu magacaabo Maangaay oo hoostagta degmada Jowhar.
Deeqdan oo loo marsiiyay barakacayaasha dhanka webiga ayaa waxaa ka faa’iideystay kudhawaad 700 oo qoys, kuwaasi oo saameyn uu ku yeeshay roobabka iyo fatahaado ka dhashay webiga shabeelle.
Qaar ka mid ah qoysaska ka faa’iideystay kaalmada la gaarsiiyay oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in deeqdan ay ku soo beegantahay xilli loo baahnaa, ayna uga mahadcelinayaan intii soo gaarsiiyay.
Qoysaska ayaa yiri “Waxaa naloo keeenay waxyaabaha gabaadka laga dhigto kaneecada, daawooyin, maacuun, iyo kuwa kale, hay’ada kale waxaan ka codsaneynaa inay na soo gaarsiiyaan gurmad kan oo kale”
Waxqabadka Dawladda ee isbuucii la soo dhaafay "SAWIRR"